Anosizato Atsinanana : mpitarika sarety nisavika kamiao maty voahitsaka | NewsMada
Anosizato Atsinanana : mpitarika sarety nisavika kamiao maty voahitsaka
Maty tsy tra-drano, voahitsaka teo amin’ny valahany, notetezin’ny kodiaran’ny kamiaobe nosavihany ity mpitarika sarety iray, 55 taona, teny Anosizato Atsinanana, omaly, tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro.
Voalaza fa nisavily kamiao Mercedes-Benz 1113 iray izy io, kanjo nijanona tampoka ka latsaka tao ambany ary voahitsaka. “Tapaka ary nivoaka ra ny kibony. Teo amin’ny valahany mihitsy no notetezin’ny kamiao ilay rangahy”, hoy ny fitantarana. Araka ny voalazan’ny olona teny an-toerana, mpitarika sarety efa miasa eny Anosizato sy Anosibe iny ity maty ity. Kamiao efa fitaterany entana ihany no nosaviliany, kanjo izao namono azy izao indray.
“Efa fanaon’ity lehilahy ity ny misavika kamiao tahaka izao. Misy fotoana sady miaraka amin’ny sarety izy no misavika. Tratran’ny tsy nampoizina tampoka izao”, hoy ny filazan’ny olona.
Tsy tazan’ny mpamily akory ny fisian’izy ity nisavika sy nilatsaka tao ambany kamiao. Efa ny hikiakan’ny olona ny nanaitra azy. Nitangorona ny olona nanoloana izany. Tonga teny an-toerana ny polisy ary nitondra ny mpamily niala teny an-toerana. Raha ny fanazavana azo, tsy nisy fahadisoan’ny mpamily, saingy nahafaty olona kosa ny fiara nentiny ka tsy afa-miala izy.
Iny Anosibe sy Anosizato Atsinanana iny izay isehoana lozam-pifamoivoizana matetika. Na ireo miampita ny arabe mandeha tampoka tsy tazan’ny mpamily na ny mpisavika fiara tahaka izao. Maro ireo ankizy mpangataka manao io fomba io izay tena maro eny Anosibe iny.
Fiara nivadika afovoan’arabe
Vokatry ny lalana malama, omaly, nivadika teo am-povoan’arabe eny Bel’Air ny fiara iray Land Rover. “Tsy fantatra izay nahazo azy ity, nandeha avy any ary nivadika ambony ambany tampoka teo afovoan’arabe. Navoaka tao ny olona naratra”, hoy ny teny amin’ny manodidina. Soa ihany fa tsy nisy fiara hafa nodomin’izy io, na olona teny amin’ny sisin’arabe ihany koa. Nanapaka lalana nandritra ny fotoana naharitra ity loza ity.
Mampitandrina ny rehetra ny mpitandro filaminana mba samy hitandrina amin’ny fotoana mampalama ny lalana na eto an-dRenivohitra na ny mivoaka mahazo ny lalam-pirenena ihany koa. Mampidi-doza ary toy ity nitranga teny Bel’Air ity ny mety hahazo ny mpitondra fiara.